Ndị na-ahụ maka Intanet - Njem Mmasị Enyemaka Disaster
Ụlọ Ọrụ Enyemaka Disaster na-enye nri na-enweghị isi, obere ngwá ọrụ / kichin na ndị ọrụ afọ ofufo iji nyere ndị ọdachi dakwasịrị aka - na idei mmiri, oké ifufe, ifufe, ọkụ, ala ọma jijiji, wdg. Anyị nwere Director nke Outreach nke na-arụ ọrụ na nke a. ihe omuma iji dozie akwukwo nso na ebe anyi na enyere aka. Site n'enyemaka nke ụka dị iche iche n'ógbè ndị ahụ metụtara, anyị nwere ike ije ozi dịka mmadụ 4,000 kwa ụbọchị na kichin igwe anyị.
Anyị na-agbalị ịkọrọ ha ịhụnanya na nghọta Jizọs. Anyị chọrọ ka ha mara na Chineke na-eche banyere anyị na anyị onwe anyị. N'ihi mgbalị ndị ọrụ afọ ofufo na-arụ n'ụlọ ọrụ ndị ozi ala ọzọ a, ọtụtụ narị ọmụmụ Bible eduziwo ma anyị maara ọtụtụ ndị e mere baptizim n'ime Kraịst. Karịsịa, ndị ọrụ afọ ofufo anyị nọ n'ebe ahụ iji nyere ụka aka.